वीरगंज युथ एकेडेमी द्वारा ३ गोल फाइनल खेल शनिबार | निजगढ डट कमबाट लाइभ – Nijgadh Fast Track News, Airport News and Latest News of Nijgadh Bara Parsa Rauthat & Middle Terai Region of Nepal::: Nijgadh.com Nijgadh Samachar Bara First online News
जितलाल श्रेष्ठ , निजगढ, १४ फागुन/
निजगढमा सञ्चालित शहीद हीरालाल स्मृति तेस्रो गोल्डकप फूटबल प्रतियोगिताको बिहीवार भएको दोस्रो तथा अन्तिम सेमिफाइनल खेल वीरगंज युथ एकेडेमीले जितेको छ।
चपुर ११ रौतहटलाई १ का विरुद्ध ३ गोल गरी वीरगंज युथ एकेडेमी विजयी भएको हो। खेल शुरु भएको २४ औं मिनेटमा वीरगंज एकेडेमीका जर्सी नं. ११ का कृष्ण शाक्यले प्रहार गरेको फ्रि किक सीधै गोलमा परिणत भएको थियो ।
चपुर ११ का गोलरक्षकले बल नियन्त्रणका लागि हानेको डाइभ निरर्थक साबित हुन पुग्दा गोल भएको थियो। वीरगंज एकेडेमीले गरेको गोलको १ मिनेट बित्न नपाउँदै चपुर ११ रौतहटका जर्सी नं. १० का राजु लामाले गोल फर्काएर टीमका खेलाडीको मनोबल खस्किनबाट जोगाएका थिए।
वीरगंज युथ एकेडेमीका तर्फबाट खेलको दोस्रो हाफमा जर्सी नं. ११ का कृष्ण शाक्यले पुन: २४ औं मिनेटमा गोल गरी टीमलाई अग्रता दिलाए। त्यसैगरी जर्सी नं. १२ का चतुर्धन चौधरीले दोस्रो हाफको २८ औं मिनेटमा गोल थपेपछि १ का विरुद्ध ३ गोल अन्तरले वीरगंज युथ एकेडेमी जीत हात पार्दै फाइनलमा प्रवेश गरको हो।
निकै रोमाञ्चक र प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा उत्कृष्ट खेल प्रर्दशन गरेबापत वीरगंज युथ एकेडेमीबाट २ गोल गर्ने जर्सी नं. ११ का कृष्ण शाक्यलाई आजको म्यान अफ दि म्याच घोषित भए ।
शनिवारको फाइनल खेल वीरगंज युथ एकेडेमी र आरएफसी चितवनबीच हुनेछ।
शहिद हिरालाल स्मृति तेस्रो गोल्ड कपको फाईनलमा विरगंज युथ एेकेडिमीको जित
२०७४, ५ चैत्र सोमबार १५:०७ March 19, 2018 Nijgadh.com
२०७४, २५ चैत्र आईतवार १६:०२ April 8, 2018 Nijgadh.com
२०७२, १२ फाल्गुन बुधबार ०९:२१ February 24, 2016 Nijgadh.com